Xanuuno Qarniyo Kahor Laga Dabar Jaray Dalalka Bariga Dhexe Oo Dib Ugu Soo Noqday Dad Badana Dilay ! - Wargane News
Home Entertainment & Lifestyle Xanuuno Qarniyo Kahor Laga Dabar Jaray Dalalka Bariga Dhexe Oo Dib Ugu...
Dhibaatooyinka badan ee ay abuureen dagaaladii ka dhacay Dalalka Bariga dhexe xilliyadii hore ayaa waxay kaga tageen xanuuno dad badani ku naf waayeen oo ay ka mid ah yihiin Faaliga ku dhaca Carruurta iyo Daacuunka ama shuban biyoodka.
Warbixin ay soo saartay Laanqayrta cas ee Adduunku ayaa waxay ku cadaysay in dhibaatooyinka iyo dagaaladu ka tageen Dalalka bariga dhexe ay si toos ah u baabiinayaan adeegyada caafimaad.
Dalalka ugu badan ee ay xanuunadaasi dib ugu soo noqdeen waa Suuriya iyo Yeman oo ay Dagaalo ka socdaan sanado dhawr ah.
Sidoo kale, warbixintu intaasi waxay ku dartay in Biyaha laga cabo Dalalkaasi ay sabab u yihiin xanuunadan aan soo sheegnay waayo?, waxay Dadku Cabaan Biyo aan nadiif ahayn.
Si kasataba ha ahaatee Dalalka Bariga dhexe ee aynu soo sheegnay ayaan muddooyin aad u dheer lagu arag xanuunadani, balse markii ay dhibaatooyinkaasi ka bilaabmeen Dalalkaasi wax dib usoo baxay xanuuno qarniyo kahor laga dabar jaray Dalalkaasi.